seasonal flu | | MyanCare
(+95)979 811 5566 info@myancare.org
မိမိတို့၏ ဦးတည်ချက် နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး လောလောဆယ် လက်ကျန်မရှိအောင် ကုန်နေပြီ
by myatlynn | Aug 13, 2020 | ကလေးကျန်းမာရေး
မိုးလယ်ကာလမှာ တော်တော်ရွာတဲ့မိုးကြောင့် သားသားမီးမိးတို့၏ မေမေများ ရင်သွေးလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရမဲ့ အနေအထား ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
ဒီကြားထဲ ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး က ပစ္စည်းလက်ကျန် မရှိ၊ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲနေသည်။
ဝယ်ရလျှင်လဲ ဈေးကြီးပြန်သည်။ ကဲ ..မေမေတို့ရေ.. ရင်သွေးလေးတွေကို ကာကွယ်ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်သာလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပြီ…။
by myatlynn | Aug 14, 2020 | ကလေးကျန်းမာရေး
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါသည် တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘ္ဘာလုံး နိုင်ငံအနှံ့အပြား တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစား A B C D ဟူ၍ လေးမျိုးရှိပြီး A နှင့် B အမျိုးအစားသည်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
သမပိုင်းဒေသများတွင် ဆောင်းတွင်းကာလ၌သာရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အပူပိုင်းဒေသများတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ကလေးအား ရောဂါကူးစက်ပုံများမှာ
ကလေးအား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိရာမှ ကူးစက်ခြင်း – ကလေးအား ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါပိုးရှိနေသော မိခင်(သို့) အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းရှုပ်ခြင်း၊ ချီပိုးခြင်း စသဖြင့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိပါက ကူးစက်တတ်သည်။
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါပိုးရှိနေသော မိခင်(သို့) အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က ကလေးအသုံးပြုလျက်ရှိသော ကစားစရာများ၊ အဝတ်အထည်များအား ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိလျှင်လည်း ကူးစက်တတ်သည်။
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါပိုးရှိနေသော မိခင်(သို့) အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က ချောင်းဆိုး နှာချေခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အမှုန်များသည် လေထဲမှတဆင့် ကလေးထံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြင့်လည်း ကူးစက်တတ်သည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၁ ရက်မှ ၃ ရက် အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကလေးတွင် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ
ကလေးနုံးခွေနေခြင်း၊ အစာမစားခြင်း တို့ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အဆုတ်အအေးမိခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ထိပ်ကပ်နာတည်ခြင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဂရုစိုက် သတိပြု ကာကွယ်ကုသရမည့် ရောဂါပင်ဖြစ်သည်။
ကလေးများကို ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါမှ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ
အသက် ၆လ ကျော်မှ ၅နှစ်အတွင်းကလေးငယ်များဆိုပါက – ၁နှစ် ၁ ခါ ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း
ကလေးအသက် ၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်ထဲနေထိုင်သူ တစ်ဦးဦး ရက်ရှည်ဖျားနာနေလျှင် မိသားစုဝင်များအားလုံး ရာသီတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း
ချောင်းဆိုး၊ နှာချေလျှင် လက်ကိုင်ပဝါဖြင့် အုပ်ပြီး ချောင်းဆိုး၊ နှာချေခြင်း၊ကလေးကိုလည်း လက်ကိုင်ပဝါ၊တစ်ရှူး သုံးတတ်အောင် သင်ပေးခြင်း
မိမိလက်ရော ကလေးလက်ကိုပါ စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောခြင်း
ကလေးငယ်များအား လူထူထပ်သောနေရာများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းမှ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ခြင်း
လုံလုံလောက်လောက် ကောင်းစွာ အနားယူအိပ်စက်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး စတာတွေ အားလုံးအတွက်..
အားကိုးစရာ မေးမြန်းတိုင်ပင်စရာ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ရှိထားသင့်ပါတယ်။
ကလေးကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်
နေ့/ည အချိန်မရွေး ၂၄နာရီ ဆက်သွယ်နိုင်ရမယ်
ဆေးကုသတာအပြင် ကလေးအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး
(ဥပမာ – ကလေးကို ဘာကျွေးရမလဲ၊ စကားမြန်မြန်ပြောတတ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲ)
စတာတွေလို ကလေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ တိုင်ပင်နိုင်ရမယ်
ကလေးရဲ့ အဒေါ်၊ ဦးလေး တစ်ယောက်လို ရင်းရင်းနှီးနှီး အားကိုးနိုင်ရမယ်
အပေါ်ယံ ယေဘုယျမဟုတ်ပဲ ကလေးအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိထားပြီး တိုင်ပင်ပေးနိုင်ရမယ်
ဆရာဝန်ဘက်ကနေလည်း အချိန်မှန် ဆက်သွယ်ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးရမယ်။
by myatlynn | Aug 22, 2020 | ကလေးကျန်းမာရေး
မိုးဦးကာလ မှာ သားသားမီးမီးလေးတွေ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။ မိုးရာသီမှာ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး နဲ့ တခြား ရောဂါမျိုးစုံတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရောဂါပိုးကို သယ်ဆောင်တဲ့ ပိုးမွားတွေ ပေါက်ဖွားမှု များတဲ့ အတွက် တခြားရာသီတွေထက် ဖျားနာတာတွေ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖျားနာတာတွေ မဖြစ်အောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် အာဟာရပြည့်ပြည့် ကျွေးတာတွေ၊ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့ ပိုးမွားတွေ မထိတွေ့အောင် ကာကွယ်ရမှာတွေ၊ ဖျားနာတဲ့ သူတွေနဲ့ မထိတွေ့အောင် ရှောင်ကြဉ်ရမှာတွေက ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့ တာဝန်ပါနော်။
အခုလို ရာသီမှာ သာမန်ဖျားနာတာ၊ ရာသီတုတ်ကွေး၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါ (A) စတာတွေ အဖြစ်များပါတယ်။
သာမန်ဖျားနာ တာ ကူးစက်လွယ်ကူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဗိုင်းရစ် ဝင်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အသက်ရှု လမ်းကြောင်းကို ဝင်ရင် ဖျားတာ၊ နှာစေးတာ တို့ ကိုယ်ပူတာတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သာမန်ဖျားနာတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆို အပြင်သွားရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်တာတို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ပြုမူစားသောက်မယ်ဆို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရာသီတုတ်ကွေး Seasonla Flu or Influenza,ဟာ သာမန်ဖျားနာတာလိုပဲ ဗိုင်းရစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကူးစက်လွယ် ပါတယ်။ သာမန် ဖျားနာတာနဲ့ မတူတာကတော့ ရာသီတုတ်ကွေးဟာ ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ရင် ဆေးကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ ဝင်နိုင်ပါတယ်။
နမိုနီးယား အဆုတ်ကို ရောဂါပိုးဝင်ပြီး
နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ-နှလုံးရောဂါ၊ asthma ရောဂါ)
တချို့ အခန့်မသင်ရင် သေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ရာသီတုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုးတာလို့ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တာဆီးရေးအဖွဲ့ကြီး(CDC) က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရာသီတုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၆လ အထက် မည်သူမဆို ထိုးနိုင်ပါတယ်။
ရာသီတုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို ၁နှစ် တစ်ခါ ထိုးသင့်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာအပြင် မိမိကိုယ်ကို မကူးအောင် နဲ့ တခြားသူတွေကို ကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဖျားနာနေတဲ့သူတွေနဲ့ မထိတွေ့အောင်နေရပါမယ်။ ဖျားနာနေရင်လည်း တခြားသူတွေဆီ မကူးအောင် မထိတွေ့အောင် ကာကွယ်ရပါမယ်။
ဖျားနာနေရင် အိမ်၊ ကျောင်း၊ အလုပ် စတာတွေ မသွားဘဲ အိမ်မှာပဲ အနားယူသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့တာကို ကာကွယ်ပေးမှာပါ။
ပါးစပ် နှာခေါင်းတို့ကို ကာထားပါ
ချောင်းဆိုး၊နှာချေတဲ့အခါ ပါးစပ်၊နှာခေါင်းတို့ကို လက်ကိုင်ပုဝါ၊ Tissue တို့ဖြင့်ကာကွယ်ပါ။ ပါးစပ်၊နှာခေါင်းတို့ကို ကာထားခြင်းဟာ ချောင်းဆိုး၊နှာချေခြင်းအားဖြင့် လေထဲက ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရာသီတုတ်ကွေးတို့ SARS ရောဂါတို့ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လက်ကနေ ရောဂါအများစု ကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက် လက် ကို မကြာခဏဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ လက်ဆေးဖို့ မလွယ်ကူရင် အရက်ပျံပါတဲ့ လက်သန့်စင်ရည်တွေကို သုံးပေးပါ။
မျက်စိ၊နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ
မသန့်တဲ့နေရာကို ကိုင်မိပြီး မျက်နှာကို ထိတွေ့တဲ့အခါ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏခဏ မျက်နှာကို မကြာခဏ ကိုင်တာကို ရှောင်ရှားပါ
ကလေးငယ်များတွင် မိုးရာသီတွင်အဖြစ်များသော ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါများနှင့် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲ?
ကလေးငယ်အများစုသည် ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲများတွင် ဖျားနာလေ့ရှိကြပါတယ်။
Seasonal influenza ခေါ် ရာသီတုပ်ကွေး သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းက နေ တစ်ဆင့်ဘဲ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။
ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ကြောင်း သိသာနိုင်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာများကတော့-
နှာရည်ယို ၊ နှာချေခြင်းကို တွေ့ရခြင်း
လည်ချောင်းနာခြင်း ၊ အာသီးယောင်ခြင်း
ကိုယ်တွေ လက်တွေ ကိုက်ခဲနေခြင်း
ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ အသက်ရှူမဝခြင်း
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာ တို့ကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ရာသီတုပ်ကွေးက မိုးတွင်း တွင်သော်လည်းကောင်း ၊ ဆောင်းဦးကျ ကာလများတွင်သော်လည်းကောင်း အဖြစ်များပါတယ်။
ကူးစက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများက လည်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပြီးတော့ ရောဂါဖြစ်သူဧ။် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တွယ်ခြင်းဖြင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးများ ရာသီတုပ်ကွေး မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ?
အပြင်မှ ပြန်ရောက်လျှင် (အထူးသဖြင့် လူနေထူထပ်သော နေရာများမှ ပြန်ရောက်လျှင်) လက်ကို ဆပ်ပြာ ဖြင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။
နှာချေ ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက်လည်း မျက်နှာဖုံး များကို တပ်ဆင်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။
အာဟာရ ပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက် များကို စားသုံးဖို့လိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်အနားယူရန် လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Dr. Karla Whitrock
The Second Class Honors, M.D.,Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 2000.
အခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာ မိမိရင်သွေးကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူနေတဲ့ ဖေဖေမေမေ တို့အတွက် ရင်သွေးကျန်းမာရေး လာပါပြီရှင်
လူငယ်တွေ မဖြစ်မနေ သိရှိထားရမယ့် အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေး ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်ဖို့ မိမိရင်သားကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်ကြမလဲ ?
သားသားမီးမီးတို့ ဖျားတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြုစုရမလဲ?
ကလေးငယ်တွေ ဖျားပြီ ဆိုရင်……
Archives လ ရွေးပါ အောက်တိုဘာ 2020 (54) ဩဂုတ် 2020 (102) ဇူလိုင် 2020 (2)
Categories အခန်းကဏ္ဍ ရွေးပါ COVID-19 (5) Cancer (10) Child Health (81) Dental & Oral Cavity (1) Dermatology (2) ENT (9) Family Health (10) Physician (6) Aesthetic (1) Surgery (10) Nutrition (2) OG (4) Urine & Kidneys (10) Psychology (1) Reproductive (6)
လူသားတိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်ရပါမယ်။
အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလို၊ အလုပ်အကိုင်တွေပျက်မှာမပူရ၊ ဆေးခန်းမှာတန်းစီပြီးအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစေမည့် အရည်အသွေးမြင့်ခေတ်သစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို သင့်တင့်မျှတစွာရရှိနိုင်ဖို့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရှာဖွေလေ့လာလိုက်ပါ။
Facebook Page Your Like!
No21 / 5D, Thiri Mingalar Yeikthar Street, Yankin Tws.
© MyanCare - 2020. All rights reserved.